IJabra PanaCast 20 yikhamera entsha yeJabra | ndisuka kuMac
IJabra PanaCast 20 yikhamera entsha yeJabra
Enye yezinto ezintsha zenkampani iJabra yikhamera entsha yeenkomfa zevidiyo iPanacast 20. Ngale ndlela, yikhamera eya kuphucula kakhulu umgangatho weefowuni zakho zevidiyo ezenziwe ngeMac naphi na.
Ngoyilo olulula kakhulu noluphathwayo, le khamera intsha yeJabra ikwabonelela ngomgangatho wevidiyo ye-4K, ke asiyi kuba nayo nayiphi na ingxaki xa sisenza ezo fowuni zisuka naphi na. ukonwabela umgangatho wevidiyo obalaseleyo.
Amava enkomfa ngevidiyo entsha
Kwihlabathi eliqhagamshelene ngakumbi, kuyafuneka ukuba nolu hlobo lweekhamera ezikumgangatho ophezulu ngamaxesha athile, kwaye inyani yeyokuba iikhamera kwiiMacs zethu ayisiyiyo eyona nto ilungileyo yokwenza iifowuni zevidiyo ezisemgangathweni. Ngaloo ndlela, kwimarike yangoku sifumana iindidi ezininzi zeekhamera kunye namaxabiso ahlukeneyo, le khamera intsha yakwaJabra igxile emsebenzini, njengeemveliso ezininzi zeaudio, ngoko sijongene nokuhambelana okugqibeleleyo kwiinkampani ezininzi kunye nabasebenzisi abafuna umgangatho olungileyo wevidiyo kwiinkomfa zabo zevidiyo.
Ngoku siphakathi kokuzama ukuhlala siqhagamshelene kwaye sinemveliso, inkomfa yevidiyo ibaluleke kakhulu kunangaphambili. Lixesha lokufumana isizukulwana esilandelayo sentsebenziswano yevidiyo ehlakaniphile, ekhuselekileyo kunye enxibekayo kunye ne-Jabra PanaCast 20. Ukusebenzisa ubukrelekrele bokufakelwa obuphuculweyo ukuhambisa i-suite yeempawu ezithatha amava evidiyo ukuya kwinqanaba elilandelayo, iPanaCast 20 yikhamera yomntu. .ngubani owazi kakuhle into oyidingayo nexesha oyidinga ngayo.
Ikhamera entsha yongeza ukusondeza okukrelekrele okuziqhelanisa ngokuzenzekelayo, ilensi ebukekayo yemibala eyahlukeneyo yokukhanya esinayo, kunye nezisombululo ezilungileyo njengekhava esivumela ukuba sivule imowudi yabucala. Ngokufutshane, isixhobo esihle somsebenzi kubasebenzisi abaninzi aba ngoku iyafumaneka kwiwebhusayithi yeJabra.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » IJabra PanaCast 20 yikhamera entsha yeJabra
I-Apple ibhalisa iiMacs ezintsha ngobusuku bomsitho wamarhe ngoMatshi
Ezi zezona zicelo zilungileyo zoSuku lweValentine kwiMac yakho